ဒါဟာလက်တော့ပေါ်မှတောက်ပနေဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်မထားဘူး - WINDOWS ကို - 2019
အချိန်ကျော်, ကို Android-devaysa ၏အသုံးပြုမှုကိုသင်က၎င်း၏ပြည်တွင်းရေးမှတ်ဉာဏ်လက်လွတ်စတင်လိမ့်မည်။ ဒါဟာသို့သော်ဤနည်းလမ်းများအားလုံး device များအတွက်ရရှိနိုင်မဟုတ်အများအပြားရွေးချယ်စရာခြင်းဖြင့်တိုးချဲ့နိုင်ပြီးအမြဲတမ်းဖြစ်နိုင်အာကာသ၏ညာဘက်ငွေပမာဏကိုလွှတ်စေပါဘူး။
အန်းဒရွိုက် running ကိရိယာများပေါ်တွင်အတွင်းပိုင်းမှတ်ဉာဏ်ချဲ့ထွင်အားလုံးသည်နည်းလမ်းတွေအောက်ပါအုပ်စုများသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်:
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးချဲ့။ အများအားဖြင့်, သင် applications များတပ်ဆင်နိုင်သည်ရသော SD က-ကဒ်အတွက်အထူး slot က၏ installation, ကိုဆိုလိုသည်နှင့်အခြားဖိုင်တွေ (စနစ် မှလွဲ. ) ကိုအဓိကမှတ်ဉာဏ်နှင့်အတူ jibe ။ သို့သော် SD က-card ကိုအဓိကမှတ်ဉာဏ်ယူနစ်ထက်ပိုမိုနှေးကွေးအပေါ် install လုပ် applications များ,
ဆော့ဖ်ဝဲ။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှတ်ဉာဏ်ချဲ့ထွင်မပါပေမယ့်မရရှိနိုင်အသံအတိုးအကျယ်ကို "junk" ဖိုင်တွေနဲ့အလယ်တန်း applications များအနေဖြင့်ဖြန့်ချိသည်။ ဤအတူလည်းအချို့သောစွမ်းဆောင်ရည်လာဘ်ပေးစွမ်းသည်။
တည်ဆဲနည်းလမ်းများ သာ. ကြီးမြတ်ထိရောက်မှုအောင်မြင်ရန်ပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ်။
ထို့ပြင် Android device ကိုပိုပြီးမှတ်ဉာဏ် (RAM ကို) ရှိပါတယ်။ ဒါဟာလက်ရှိအချိန်တွင်အလုပ်လုပ်သောဒေတာများ applications များ၏ယာယီသိုလှောင်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ပို RAM ကို, အပိုမြန် device ကို, ဒါပေမယ့်သူကချဲ့ထွင်ဖို့လမ်းမရှိဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ကသာလက်ရှိ running မလိုအပ်တဲ့ applications များပိတ်နေဖြင့် optimized နိုင်ပါသည်။
Method ကို 1: SD က-Card ကို
ဤနည်းလမ်းကိုသာ SD က-card ကိုထောက်ပံ့သောစမတ်ဖုန်းများအတွက်သင့်လျော်သည်။ သင့်ရဲ့ device ကိုကထောကျပံ့လျှင်သင်တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းများသို့မဟုတ်ထုတ်လုပ်သူရဲ့ website မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ထားတဲ့၏ဝိသေသလက္ခဏာများအတွက်တတ်နိုင်သမျှ, ရှုပါ။
device ကို SD က-card ကိုထောကျပံ့ခဲ့လျှင်, သင်ကဝယ်ယူရန်နှင့် install ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ installation ဟာသက်ဆိုင်ရာအမှတ်အသားရှိခြင်းအထူး slot ကဖန်ဆင်းသည်။ ဒါဟာအဖုံး device ကိုအောက်တွင်ဖြစ်နိုင်သည်, သို့မဟုတ်ခြမ်းမျက်နှာပေါ်မှာခံရမည်။ အဆုံးစွန်သောအမှု၌, ဖွင့်လှစ်သည့်ကိရိယာနှင့်အတူကြွလာတော်မူသောအထူးဆေးထိုးအပ်, မှတဆင့်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အတူတူအဆုံးမှာ SD ကတစ် slot ကအတူဆင်းမ်ကဒ်-ကဒ်ပေါင်း slot က positioned နိုင်ပါသည်။
SD က-ကဒ်၏ installation ကိုခက်ခဲမရှိ။ အဓိကမှတ်ဉာဏ်ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ဒေတာလွှဲပြောင်းရန်လိုအပ်ပါသည်ပေါ်မှာအခမဲ့မှတ်ဉာဏ်အဖြစ်ရှုပ်ထွေး, ကိရိယာများအတွက်နောက်ဆက်တွဲ configuration ကိုကဒ်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
SD က-ကဒ် apps များ Moving
SD က-ကဒ်ပေါ်ရှိအဓိကမှတ်ဉာဏ် switching
Method ကို 2: "အမှိုက်သရိုက်" ရှင်းလင်း
အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ, စစ်ဆင်ရေးသည်သူ၏မှတ်ဉာဏ်အခါအားလျော်စွာ "junk" files တွေကိုအမျိုးမျိုးနှင့်အတူပိတျဆို့နတေဲ့ devaysa, သည်, ဖိုင်တွဲစသည်တို့သည်, အချိန်ဒေတာ applications များအချည်းနှီးပင်ဖြစ်သည် လေးနက်သောနှောင့်အယှက်မရှိဘဲလုပ်ကိုင်ဖို့ device ကိုသည်မှန်မှန်ကနေမလိုလားအပ်တဲ့ data တွေကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ သငျသညျစနစ်က tools များနှင့် / သို့မဟုတ် Third-party အစီအစဉ်များကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဤအမှုကိုနိုင်ပါတယ်။
Read more: Android မှာပေါ် cache ကိုရှင်းလင်းဖို့ကိုဘယ်လို
Method ကို 3: Uninstall ကို applications များ
သူတို့သည်လည်းသင့်ရဲ့ device ကို (တစ်ခါတစ်ရံစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာ) ရက်နေ့တွင်အာကာသကိုတက်ယူစဉ်ကတည်းကသင်အသုံးပြုမ Applications ကိုကဖယ်ရှားပစ်ရန်ပညာရှိဖြစ်၏။ များစွာသောပလီကေးရှင်း၏ဝေးလံခက်ခဲမရှိ။ သို့ရာတွင်ထိုသို့သူတို့ကိုသင်အသုံးမပြုလျှင်ပင်, စနစ် applications များဖယ်ရှားပစ်ရန်ကြိုးစားရန်အကြံပြုမဟုတ်ပါဘူး။ တခါတရံသူကတို့ထိလျက်, ထုတ်လုပ်သူများထံမှတချို့ software ကိုမှမ သာ. ကောင်း၏။
Android ပေါ်မှာ apps များ uninstall လုပ်ဖို့ဘယ်လို: ဆက်ဖတ်ရန်
Method ကို 4: လွှဲပြောင်းမီဒီယာ
ဓာတ်ပုံများ, ဗီဒီယိုများနှင့်ဂီတအကောင်းဆုံးထိုကဲ့သို့သော Google Drive ကိုအတိုင်း SD က-ကဒ်သို့မဟုတ်မိုဃ်းတိမ်ကိုဝန်ဆောင်မှုများအပေါ်တစ်နေရာရာမှာသိမ်းထားပါတယ်။ မှတ်ဉာဏ် devices နဲ့ဒါကန့်သတ်ခြင်း, "ပြခန်း"ပုံနဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုနှငျ့ပွညျ့စုံ, တစ်ဦးအလွန်လေးလံသောဝန်ဖန်တီးပါ။
Read more: အဘယ်သို့ငါ SD က-ကဒ်ဖိုင်တွေလွှဲပြောင်းပါဘူး
သငျသညျ SD ကမှဖိုင်များကိုလွှဲပြောင်းလုပ်မပေးနိုင်လျှင်ကကို virtual disk ကို (Google Drive ကို, Yandex Drive ကို, Dropbox ကို) ရက်နေ့တွင်ဖျော်ဖြေနိုင်ပါသည်။
Google Drive ကိုမှဓာတ်ပုံများလွှဲပြောင်း၏ဖြစ်စဉ်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ:
တစ်ဦးကို virtual disk ကိုပြောင်းရွှေ့ချင်ပါတယ်တဲ့သူတွေကိုဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများ, ကိုရွေးပါ။ , မျိုးစုံပစ္စည်းကိုရွေးချယ်ပါစက္ကန့်အနည်းငယ်အဘို့ထိုသူတို့တဦးနှိမ့်ချကိုင်, ပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲပေါ်တွင်အမှတ်အသားစီစဉ်ရန်။
အောက်ခြေတွင်သငျသညျသေးငယ်တဲ့ menu ကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီမှာ item ကို Select လုပ် "Send".
ရှေးခယျြစရာအနက်ကို select "Google Drive ကို".
သင် disc ကိုအပေါ်ဒြပ်စင်စေခြင်းငှါစေလွှတ်လိမ့်မည်ရှိရာ folder ကိုသတ်မှတ်ပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့်သူတို့ကအမြစ် folder ကိုကူးယူထားပါသည်။
အောက်ခြေ Menu ထဲမှာတစ်ခု option ကို select လုပ်ပါ "ကိုဖျက်".
ဤညွှန်ကြားချက်ကိုသုံးပြီး, သင်ဖုန်းရဲ့ internal memory ကိုချဲ့ထွင်နိုင်, အဖြစ်က၎င်း၏အလုပ်ကိုအရှိန်အဟုန်မြှင့်ရန်။ သာ. ကြီးမြတ်ထိရောက်မှုအဘို့, အဆိုပြုထားသောနည်းလမ်းများပေါင်းစပ်ဖို့ကြိုးစားပါ။